Amboary ny fakantsary tsy mifandray amin'ny bug ao amin'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Amboary ny lesoka 'fakan-tsary tsy mifandray' ao amin'ny OS X
Satria tsy misy rafitra tonga lafatra amin'ny iray manontolo, misy karazana lozam-pifamoivoizana mitranga amintsika foana. tsy azontsika ny antony hitrangan'izany tampokaIty dia ohatra iray amin'ny iray amin'izy ireo ary izany dia ny fakantsary tafiditra ao anaty fitaovana dia mety hijanona tsy miasa raha tsy misy fampandrenesana mialoha.
Ny soritr'aretina mazava indrindra dia mipoitra rehefa manamarina fa rehefa manokatra rindranasa toy ny PhotoBooth, FaceTime na programa hafa mampiasa ny fakantsary, dia mampiseho hafatra diso milaza amintsika fa ny fakantsary tsy mifandray.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fakantsary Mac?
Raha avy amin'ny rindrambaiko rafitra ny olana, dia tsy maintsy hanao izany ihany isika hanidy ny dingana tafiditra amin'izany amin'ny fitantanana ny fakantsary hampandeha azy indray, amin'ity tranga ity dia VDCAssistant izy.
Raha te hampandeha ny fakantsary Mac dia hanana ny mety hirosoana amin'ny fomba roa samy hafa isika, ny iray amin'izy ireo dia amin'ny alàlan'ny terminal ao amin'ny Utilities> Terminal ary miditra amin'ireto baiko manaraka ireto mba 'hamono' ny fizotrany:
Azontsika atao koa ny manao azy amin'ny alàlan'ny Monitor Monitor amin'ny zotra iray ihany Fitaovana> Fanaraha-maso ny hetsika ary ao amin'ny kiheba an'ny fizotrany rehetra, atsaharo izany, na dia hahatongavana eo amin'io teboka io aza dia tsy maintsy asianay marika eo amin'ny menio View ny fizotrany rehetra.
Sintomy ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad
Azo ampiharina amin'ny fakantsary mifandray amin'ny USB ihany koa izy io na dia tsy be loatra aza zahao raha mpamily ny mpanamboatra miasa tsara amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo indray ho fisorohana. Na izany aza, raha ny olana dia tonga vokatry ny fanovana fitaovana, jereo raha misy fanavaozana ny firmware ho an'ny fakantsary resahina.
Na izany na tsy izany, ny ankamaroan'ny fotoana dia a olana anecdotal fotsiny ary ara-potoana izay hamahana azy amin'ny alàlan'ny fampifandraisana sy ny fampifandraisana ny fakan-tsary na ny famerenana amin'ny laoniny ny Mac. Ny manaitra dia ny faharetan'ny fotoana elaela izay, io fahombiazana io dia mitohy ankehitriny izay tsy hitan'ny Mac indraindray ny webcam-nao, na dia any amin'ny avo indrindra aza. -Novaova daty amin'ny rafitra.
Mazava fa tsy anisan'ny laharam-pahamehan'ny Apple ny famahana ny tsy fahombiazana izay tsy misy fakan-tsary mifandray amin'i Mac.
Fanazavana fanampiny - Avereno ny rafitra audio ao amin'ny OS X
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Amboary ny lesoka 'fakan-tsary tsy mifandray' ao amin'ny OS X
Lore Ast dia hoy izy:
Tena ilaina, misaotra
Valiny tamin'i Lore Ast
Paula Mujica dia hoy izy:
Salama, mampifandray ny fakantsary aho rehefa manokatra ny FaceTime sy Skype, fa rehefa manokatra sary aho dia tsy miseho ilay fakantsary mifandray, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Paula Mujica
Mikhail Aliosha dia hoy izy:
Salama milaza amiko izy fa tsy misy ny fizotrany, manana ny OS El Capitan aho. Afaka manampy ahy azafady?
Valiny tamin'i Mikhail Aliosha
Mariaje dia hoy izy:
Mitovy aminao ihany aho, Mikhail.
Vaovao ve ny ekipanao?
Tsy ahy, novidiako tamin'ny 2011 raha mitadidy ny fahatsiarovana, ary ny tsy fahombiazana dia avy amin'ny fanavaozana ny rafitra alohan'ny Yosemite.
Ankehitriny dia voatery mampiasa laptop Windows aho raha te hampiasa fakan-tsary miaraka amin'ny Skype.
Raha mahita vahaolana ianao dia zarao amiko. Hanao soa amiko ianao.
Manana an'i El Capitan koa aho.
Valiny tamin'i Mariaje
Nanana izany olana izany aho hatramin'ny talohan'ny Yosemite. Nahita iMac aho izay nanambola vola sasany nanala ny tenako zavatra hafa amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo zavatra ireo. Fantatro fa tsy misy rafitra tonga lafatra, saingy be loatra izany.
Nohavaoziko ihany koa ny El Capitan, toy ny fanehoan-kevitra teo aloha.
Misy vahaolana ve? Niezaka ny zavatra hitako rehetra tamin'ny internet aho, nitady tamin'ny anglisy sy espaniola, nefa tsy nisy.
Tsara raha fantatrao ny safidy hafa afaka hamaha ity olana ity.
Mark Mtz. dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko ary efa nataoko io fizotran-javatra io ary tsy misy zavatra mandeha, novakiako ihany koa ity tamin'ny lahatsoratra maro ary ilay Mac iray ihany tamin'ny 2011 no iray izay tsy nahomby. tsy nisy nankany amin'ny Apple Store.
Mila fanampiana isika, marobe ireo manana olana mitovy amin'izany.
Valiny tamin'i Marcos Mtz.
Tsy mety aminao ve ny manery ny fanakatonana ny fizotrany?
Misaotra an'i Jordi, fa tsia.
Samy nanandrana avy amin'ny terminal sy monitor aho, ary tsy misy fomba.
Tsy haiko intsony izay hatao mba hamerenana amin'ny laoniny ny fakan-tsary tafiditra ao amin'ny iMac 🙁
Raha manana sosokevitra ianao, dia ho feno fankasitrahana aho.
Ampio izay mitranga amiko toy ny tamin'ny hevitra teo aloha, tsy hitany ny fizotrany.
Manana MacBook Pro izay tiako hatsaraina ary matahotra mafy aho 🙁
Toy izany koa no nanjo ahy, Imac misy 21,5 ny taona 2012 niaraka tamin'i OsX el Capitan, ary androany rehefa nosokafako ny sary dia nandrehitra jiro, niasa vetivety, fa mainty tanteraka izao ny sary ary tsy mandeha intsony , miaraka amin'ny facebook dia mitovy, nanandrana ny zava-drehetra aho saingy tsy niasa ho ahy 🙁
Moraima Clemente dia hoy izy:
Misaotra betsaka, tena nanampy izany, manana pro macbook miaraka amin'i El Capitan ihany koa aho ary tsy afaka nampiasa ny fakantsary tamin'ny skype, fa nanery ny fizotran'ny VDCAssistant ary avy eo nanokatra ny rindranasa niasa ny fakantsary, ankehitriny tsy haiko raha avy aorian'ny nanao an'io dia hitohy hiasa na isaky ny tsy maintsy ataonao indray dia vintana ho an'ireo izay tsy nahita vahaolana, fa araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony, lafo ny fitaovana ary mivoaka miaraka amin'ny fakantsary tsy mandeha !!! Nahatonga aretim-po aho!
Valiny tamin'i Moraima Clemente
Enrique Vallejo sary placeholder dia hoy izy:
Ity safidy ity dia tsy nanitsy ny olana. Rehefa afaka roa andro nanandramako azy, dia nanandrana ny fanavaozana ilay rindrambaiko natolotr'ilay Mac ahy aho teo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery, narahin'ny fanavaozana, natomboka irery indray ny mac ary voavaha ny olana
Valiny tamin'i Enrique Vallejo
Salama, rehefa nanao ny dingana aho, nanery ny doka VDCAssistant nangataka tenimiafina tamiko, iza izany, misaotra
Mamaly an'i henry
Luis Aleidy dia hoy izy:
Salama, manana Macbook Air 2014. Niasa tsara ny fakan-tsary tamin'ny voalohany, saingy nahazo ilay hafatra aho (Tsy nisy fakan-tsary napetraka), namerina namerina ilay solosaina aho ary indraindray mandeha. Tsy nanana vintana intsony aho tamin'ity fomba ity. havaozy ny rafitra amin'ny OS Sierra bebe kokoa ary mbola manana olana mitovy amin'izany ihany aho. Ireo mpampiasa Mac dia tsy maintsy miaina miaraka amin'ity olana ity?
Valiny tamin'i Luis Aleidy
Luis Oscar dia hoy izy:
Manana macbook 2013 amin'ny Sierra aho. Manana an'io olana io ihany aho voamarika ary niezaka hanaraka ireo bitsika. Fa rehefa apetrako ny sudo killall. . ary manontany ahy ny tenimiafiko aho, mahazo signal error: tsy nisy processes match hita ary mbola "écran tsy mifandray" daholo. Mety ho olana momba ny fitaovana io?
Valiny tamin'i Luis Oscar
Manana pro macbook aho nanomboka ny taona 2013. Manana olana mitovy amin'izany aho: ny fakantsary dia miseho ho tapaka amin'ny rindranasa rehetra ampiasaina. Niezaka ny nampihatra ny "sudo killall" aho. . . » Saingy, taorian'ny nampidirako ny teny miafiko dia nahazo fambara diso aho: "tsy nisy mpikirakira mifanentana hita" ary avy eo tsy misy làlana mankany aloha. Misy sosokevitra ve?
Alan hugo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Alan Hugo
Manana fakantsary basy aho ary tsy hitan'ny macbook-ko? ny ataoko
Niasa tamin'ny voalohany, toa ny voalazanao amin'ny safidy terminal, misaotra!
Julieth Ramos dia hoy izy:
Nahavita ny dingana rehetra aho ary mbola tsy mandeha. Manana MacBook Pro (13-inch, Faran'ny 2011) aho, izay nanavao ny rafitra tao amin'ny MacOsSierra 10.12.4.
Valiny tamin'i Julieth Ramos
Berenice dia hoy izy:
Salama! Manana Macbook Pro aho (miaraka amin'ny MacOs Sierra 10.12.4) ary rehefa namindra ilay solosaina finday aho dia tapaka ny antso an-tsarimihetsika Skype, ka tsapako fa nijanona tsy niasa ny fakantsary mandra-pijanony tanteraka. Inona no azoko atao mba hampandeha azy indray? Misaotra indrindra anao!
Valiny tamin'i Berenice
ENY, MIASA ITY. Nanandrana ny safidy voalohany aho ary nety tsara izany, afaka miditra amin'ny fakantsary aho izao.
Mamaly an'i jessica
Mampalahelo fa nametraka fandaharam-pahalotoana na tsy fitoviana eo amin'ny rafitra fiasan'izy ireo ny MACs, sendra tranga izay tsy fanajana ny fanatsarana ny fitoniana na ny fahombiazan'ny mac no avelany averina ary averina alaina avy amin'ny 0. Mitandrema amin'ny fanavaozana ary Eny, ireo izay manana Mac izay 5 taona farafahakeliny, tsara kokoa ny mitsitsy satria tsy maharitra ela dia tsy hahomby. Miarahaba.
Tena tsara !! Nataoko tamin'ny alàlan'ny terminal, namerina ary voila!
Valiny amin'i RAFAEL
Jorge Noreña dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jorge Noreña
Ny safidy terminal voalohany dia mandeha tsara, misaotra betsaka
Salama, manao ahoana ry sakaiza? Hitako fa niasa tamin'ny maro izy io, fa tsy ho ahy. Manana rafitra MacBook Air 2011 miaraka amin'i Sierra aho. Rehefa manao ny dingana amin'ny alàlan'ny Terminal aho dia milaza izany amiko.
Tsy nisy fizotran'ny fitoviana hita
Raha misy mahalala ny vahaolana ary afaka mizara izany dia tiako izany.
Misaotra anao!! Niasa tamin'ny voalohany.
Simona dia hoy izy:
Salama! Manana macPro miaraka amin'i Os Sierra kinova 10.12.6 aho ary tsy hitan'ny webcam aho.
Tsy nanavao ny rafitra aho noho ny tahotra sao tsy mandeha ny zavatra hafa ... fa miaraka amin'ireo torolàlana etsy ambony no ahazoako ity hafatra ity:
Misy olona afaka manampy ahy ve? Misaotra betsaka anao nizara an'ity karazana fampahalalana ity.
Mamaly an'i simona
Radhika Devi dia hoy izy:
Super! Nanao ny dingana faharoa aho ary teo no ho eo ny vahaolana, misaotra betsaka, tsara fanahy be ianao.
Valiny tamin'i Radhika Devi
Memo Garcia dia hoy izy:
Misaotra indrindra anao!! Afaka namaha ny olana aho rehefa manazava azy ianao, tsara!
Mamaly an'i Memo García
Tsy mahita ny fakantsary ny fakan-tsary, ny vahaolana amin'ny terminal dia milaza amiko fa tsy mahita ny fizotrany izany baiko izany ary amin'ny fanaraha-maso ny rafitra dia tsy mahita ilay vdcaAssistant manana MacBook Air 11 fiandohan'ny taona 2014 miaraka amin'i Mojave aho satria noheveriko fa mety izany voavaha tamin'ny rafitra vaovao fa tsy toy izany, tsy niara-niasa tamin'i High Sierra intsony.
Valio amin'i NIco
ralke dia hoy izy:
Toy izany koa no mahazo ahy raha mitaha amin'i mariaje sy mariaje.
Manana ny kapiteny aho ary rehefa manoratra ny killall dia hitako fa tsy mety ny teny miafina.
Androany aho no nanao azy ary nandaitra. Novonoiko ilay izy ary afaka andro vitsivitsy dia manana olana mitovy amin'izany indray aho, saingy tsy manamboatra na inona na inona intsony aho amin'ity indray mitoraka ity.
Nanandrana tamin'ny fanaraha-maso ny hetsika aho ary tsy misy na dia iray aza ny killall na VDCAssistance hita ao.
lafo be ireto macs ireto ka tsy mahavita azy ary tsy azo amboarina
Mamaly an'i ralke
SOL dia hoy izy:
misaotra !! <3 niasa tsara
Valio ny SOL
Lahatsoratra tena tsara !!!! Nanampy ahy hamerenana ny fakan-tsarin'ny MBP-ko !!!!! Misaotra anao!!!!
Tsy mandeha amin'ny Mac book 2011 ny torolalana omena anao
Efa nanana vahaolana ve ianao?
Salama, manana MacBook Air 2011 (High Sierra) aho ary efa nanandrana ny dingana rehetra aho nefa tsy mandeha izy io, raha ny tena izy amin'ny fikirakirana sy ny fiainana manokana dia tsy miseho ilay fakan-tsary, toy ny tsy apetraka izy io, azafady mba ampio !!!
Alejandra Renaux dia hoy izy:
raha mandeha izy fa, matetika dia tapaka. Ahoana no ahafahako manamboatra izany? satria voatery niditra an'ireto baiko ireto aho indraindray hatramin'ny in-3 isan'andro .. Misy vahaolana ve amin'izany?
Valiny tamin'i Alejandra Renaux
Hey, misaotra betsaka, mametraka fotsiny ao amin'ny terminal ary mamerina ny rafitra efa niasa ho ahy ary manana macBook Pro aho tamin'ny voalohan'ny taona 2011. Misaotra betsaka ^ __ ^
Valio amin'i NEREA
Karolin Yisset dia hoy izy:
Misaotra betsaka!! Voavaha io!
Valiny tamin'i Karolin Yisset
Apple dia nandefa ny macOS High Sierra sy beta beta ho an'ny daholobe 11
Hanomboka Apple Watch miaraka amin'ny LTE ve i Apple?